Codsiga xiriirka qoyska waxaa loo xareyn karaa si elekterikaal ah - Asylum in Finland
Waxaad ogolaanshaha degitaanka Finland ee ku saleysan xiriir qoys uga codsan kartaa si elekterikaal ah cinwaanka enterfinland.fi. Codsiga elekterikaalka ah wuxuu weli u baahan yahay in la tago safaaradda Finland. Marxaladda codsiga elekterikaalka ah waa in lagala socdaa adeegga elekterikaalka ah.
Sidan ayaad u sameynaysaa codsiga elekterikaalka ah:
Gal adeegga eleketerikaalka ah: enterfinland.fi
Dooro ”Ogolaansha degitaanka ee koowaad”.
Si taxaddar ah u aqri uguna hoggaansan tilmaamaha adeegga.
Keenso dukumentiyada loo baahan yahay, sharciyee kaddibna u beddel iyaga qaab elekterikaal ah.
Sameyso aqoonsiga isticmaalaha. Qof kasta oo qaangaar ah waa in uu sameystaa aqoonsiga isticmaalka. Waalidka oo kaliya ayaa u codsan kara ogolaanshaha degitaanka cunugga aan qaangaarin.
Si taxaddar ah u buuxi foomka. Faahfaahinno dheeraad ah oo la dalbado waxey gaabis u keeni karaan ka baaraandegista codsiga.
Booqo safaaradda si aad isu caddeyso
Marka aad codsiga ku buuxiso internetka, waa in aad tagtaa wakiilka dibadda ee Finland si aad isu caddeyso. Is-caddeynta ujeedada laga leeyahay waa hubinta qofka aad tahay iyo in lagaa qaado aqoonsiyada jismiyeed ee uu sharcigu amrayo. Tag oo is-caddee saddex bilood gudohood laga soo billaabo dhigista codsiga. Sii qaado asalka dukumentiyadi aad ku xareysay adeegga elekterikaalka ah iyo sawir baasaboor. Haddii loo baahdana waa in aad safaaradda u tagtaa wareysi.
Marxaladda codsigaada kala soco adeegga
Joogto ula soco xaaladda codsigaada adigoo gelaya akoonkaada. Haddii caddeyn dheeraad ah looga baahdo codsiga, warka codsiga caddeynta dheeraadka ah waxaa la soo gelinayaa oo kaliya adeegga. Haddii aadan ka jawaabin codsiga caddeynta dheeraadka ah, codsigaada waxaa laga gaarayaa go’aan diidmo ah. Waxaad adeegga ka arkeysaa waqtiga dhabta ah ee marxaladda ka baaraandegista. Islamarka go’aanka la gaaro, waxaa laga arkayaa akoonka aad adeegga ku leedahay.
Macluumaadyada go’aaanka qofka qoyska isu keenaya ee laga doonayo in uu heysto xubinta qoyska ka tirsan
Haddii xubinta qoyskaada ka tirsan ee Finland timid ay dalka ku timid megangelyo-doonnimo ama qaxooti qawiman, waa in aad macluumaadyada soo socda ka heysataa go’aanka xubinta qoyskaada ka tirsan marka aad codsiga xareyneyso:
sababta ogolaanshaha joogitaankiisa (tusaale megnagelyo, badbaadinta derajada labaad)
waqtiga go’aankiisa la sameeyay
waqtiga uu helay ogeysiinta go’aanka.
Ku sii aqri ingiriis:
Applications for a residence permit on the basis of family ties can be submitted online from 11 November
Fiidiyow af-ingiriis ah: Enter Finland
codsiga megangelyda ogolaansha degitaanka qoys